ကုတင်ခြေရင်းကို အလှဆင်ခြင်း - ဘယ်ပရိဘောဂတွေ ထည့်လို့ရမလဲ။ | Bezzia
Susana godoy | 06/01/2022 14:00 | အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ
ကုတင်ခြေရင်းကို အလှဆင်ပါ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ရွေးချယ်စရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပရိဘောဂများနှင့် အသေးစိတ်အချက်များ အားလုံးသည် တရားဝင်သော်လည်း၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းကို စီစဉ်ရန် များစွာကူညီပေးနိုင်သည့် အထူးနေရာတစ်ခုကို မေ့သွားနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အယူအဆများစွာရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင်၏ အရသာ သို့မဟုတ် သင်၏ သီးခြားအိပ်ခန်း၏ စတိုင်အပေါ်တွင် အမြဲတမ်း အခြေခံနေလိမ့်မည်။. သိုမှီးနိုင်စေမည့် ပြီးပြည့်စုံသော၊ မူရင်းအလှဆင်မှုကို ခံစားလိုပါက အောက်ပါအရာများကို လက်လွတ်မခံဘဲ ထားလိုက်ပါ။
1 ခြေထောက်ကို ပင်စည်ဖြင့် အလှဆင်ပါ။
2 ဆိုဖာတစ်လုံးကို ထားလိုက်ပါ။
3 ကုတင်ဘေးက စာအုပ်ဆိုင်
5 ခွေးခြေနှစ်လုံးကို လောင်းပါ။
ခြေထောက်ကို ပင်စည်ဖြင့် အလှဆင်ပါ။
ခြေထောက်ဘုတ်ကို အလှဆင်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ စိတ်ထဲမှာ ပေါ်လာတဲ့ ပထမဆုံး စိတ်ကူးတွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ အမှန်က ဒီကျေးဇူးကြောင့် သူ့အသွင်အပြင်က အများကြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ ပြောရမယ်။ ငြိမ်နေပေမယ့် အိပ်ခန်း၏ ဤဧရိယာအတွက် ရှေးကျသော မော်ဒယ်များ ရှိသေးသည်၊ ပိုမိုစတုဂံပုံသဏ္ဍာန်ရှိသော အခြားအချောများကို သင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ နှင့် minimalist အမျိုးအစား ဥပမာအားဖြင့် wicker သို့မဟုတ် အဝါနုရောင်ရှိသော အရောင်ဖြင့်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်တို့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင် သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို သိမ်းဆည်းရာမှာ ကူညီပေးပြီး လိုအပ်ရင် စာရွက်တွေကနေ ညအိပ်ဝတ်စုံအထိ အားလုံးကို သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း ဆိုဖာ အမျိုးအစားများသည် အမျိုးစုံဆုံးဖြစ်သည်။. ထို့ကြောင့်၊ အိပ်ခန်း၏ဤဧရိယာအတွက်ပြီးပြည့်စုံမည့်တစ်ခုသေချာသည်။ ဤဧရိယာအတွက် ထိုင်ခုံနှစ်လုံးပါသော ထိုင်ခုံတစ်ခုပါရှိသော ထိုင်ခုံတစ်ခုကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ဒါပေမယ် ဒါဗင်စတိုင်လည်း အများကြီးမြင်ရတယ်။ ၎င်းတို့သည် ပိုမိုကျဉ်းမြောင်းပြီး အားပြန်မသွင်းဘဲ ခြေထောက်ဘုတ်ကိုအလှဆင်ရန် ပြီးပြည့်စုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ထိုနည်းလည်းကောင်းပင် အရပ်မရှည်သော စတုဂံပုံစံ ပရိဘောဂကို ရွေးချယ်ပါ။. ယနေ့ခေတ်တွင် ဤ modular ပရိဘောဂအားလုံးကြောင့် ပြဿနာမရှိဘဲ ၎င်းတို့ကို တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်စာအုပ်များအားလုံးကို စနစ်တကျ စနစ်တကျထားရှိနိုင်စေရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်အိပ်မပျော်သောညများတွင် ထိုပုံနှိပ်စွန့်စားမှုတစ်ခုကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် သယ်ဆောင်သွားခြင်းကို မထိခိုက်စေပါ။ ဒါဟာ သင့်စိတ်ကူးတွေကို ရိုင်းစိုင်းသွားစေမယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ယခု သင်သည် စင်များပါရှိသော ပရိဘောဂများကိုသာ ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင်ရှိသော စာအုပ်များအပြင် သင်၏သေးငယ်သော အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်သိမ်းဆည်းရန်အတွက် သေတ္တာပုံစံဖြင့် အလှဆင်အသေးစိတ်အချို့ကို အမြဲထားနိုင်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါကို ယုံမှားသံသယမရှိဘဲ အမျိုးမျိုးသော အလှဆင်မှုတွေနဲ့ မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်လို့ ချန်ထားလို့မရနိုင်တဲ့ ရွေးချယ်မှုတွေထဲက နောက်ထပ်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းသွားလို့ရတယ်။ ရိုးရှင်းသောခုံတန်းလျား၊ rustic finish သစ်သားသည် အမြဲပင် အဓိက ဖြစ်သည် ။ ဒါပေမယ့် ရွေးချယ်စရာတွေ ရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် သင်နှစ်သက်မယ့် အခြားရွေးချယ်စရာများစွာကို သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ဖိနပ်စီးဖို့ ထိုင်ခုံအဖြစ်လည်း သုံးလို့ရတယ်။ သို့မဟုတ် ၎င်းအောက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အလွန်နှစ်သက်သော သိုလှောင်မှုတွင် ဆက်လက်လောင်းကြေးများဆက်နေသည့် ခြင်းတောင်း သို့မဟုတ် သေတ္တာအချို့ကို ထားရှိပါ။
ပြီးပြည့်စုံသော ပရိဘောဂတစ်ခု၏ စိတ်ကူးကို ကျွန်ုပ်တို့ အမြဲဖော်ပြနေသည်မှာ မှန်သော်လည်း၊ အမြဲတမ်း ထိုသို့ဖြစ်ရန် မလိုအပ်ပါ။ လက်နဲ့ အလှဆင်လို့လည်း ရပါတယ်။ ထိုင်ခုံနှစ်လုံး, ဥပမာ။ ဒါကြောင့် သူတို့ကို ကုတင်ရဲ့ အဆုံးတိုင်းမှာ ထားနိုင်ပြီး အလယ်မှာ မထားပါနဲ့။ ဒါပေမယ့် မင်းမှာ နောက်ဆုံးစကားပဲရှိတယ်။ ထို့အပြင်၊ ထိုင်ခုံများသည် ရိုးရှင်းသောထိုင်ခုံများ သို့မဟုတ် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ကူရှင်တစ်မျိုးဖြင့် အဆုံးသတ်နိုင်သောကြောင့် အလွန်သက်တောင့်သက်သာရှိသော အပေါ်ပိုင်းရှိနိုင်ပါသည်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း၊ ရွေးချယ်မှုများသည် အလွန်ကွဲပြားသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အလှဆင်ခြင်းအတွက် အသင့်တော်ဆုံးကို ရှာတွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကုတင်ခြေရင်းကိုအလှဆင်ဖို့ ဘယ်အရာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ဆင်ယင်မွမ်းမံခြင်း » အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ » ကုတင်ခြေရင်းကို ဘယ်လိုအလှဆင်မလဲ။
အလုပ်အကိုင် ပျက်ပြားအောင် ဘယ်လိုရှောင်ရမလဲ
ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကြိုက်လား။ ဤ6ပြပွဲကိုခံစားပါ။